मनिषा कोइरालालाई सुषमा स्वराजका श्रीमानले भने : तपाईंले चीनलाई बीचमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ ? - samayapost.com
मनिषा कोइरालालाई सुषमा स्वराजका श्रीमानले भने : तपाईंले चीनलाई बीचमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ ?
समयपोष्ट २०७७ जेठ ८ गते १४:३७
‘म तपाईंको परिवारको गौरवशाली परम्परासँग परिचित छु । तपाईंका हजुरबुवा बीपी कोइराला र उनका दुबै भाइ अर्थात् सबै तीन दाजुभाइ नेपालका प्रधानमन्त्री बने । तपाईंकी फूपू शैलजा आचार्य पनि नेपालकी उप–प्रधानमन्त्री थिइन् ।
‘जब तपाईंले चीनलाई बीचमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईंले हामीसँगको हज्जारौं वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई समाप्त गरिरहनुभएको छ । तपाईंले हाम्रो पारस्परिक सम्बन्धलाई समाप्त गरिरहनुभएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक सर्वभौम देशको रुपमा तपाईंले आफ्नो देशको स्थितीलाई थप तल झारिरहनु भएको छ ।’ मनिषा कोइरालाले विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको एक ट्वीट रिट्वीट गरेपछि उनीविरुद्ध भारतीय मिडियालगायत विभिन्न व्यक्तित्व खनिएका छन् ।